ခါကာဘိုရာဇီတောင်ခြေက ချမ်းနေရှာမယ့်ကလေးတွေကို အနွေးဓာတ်လေးသယ်ဆောင်သွားပေးတဲ့ ကျောင်းဆရာလေး – BaHuTuTa
ခါကာဘိုရာဇီတောင်ခြေက ချမ်းနေရှာမယ့်ကလေးတွေကို အနွေးဓာတ်လေးသယ်ဆောင်သွားပေးတဲ့ ကျောင်းဆရာလေး
January 3, 2021 admin National 0
မြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ရှိတဲ့ ခါကာဘိုရာဇီတောင် ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်ရုံမက အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ အမြင့်ဆုံးတောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်…
ဒါ့အပြင် ခါကာဘိုရာဇီဟာ အမြဲတမ်း ရေခဲတွေဖုံးလွှမ်းနေပြီးအရမ်းကိုအေးတဲ့ တောင်တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်…အမြင့်ပေကတော့ ၁၉,၂၉၆ ပေ မြင့်ပါတယ်…. ကချင်ပြည်နယ် မချမ်းဘောမြို့ရဲ့ အနောက်မြောက်ဘက် မိုင် ၈ဝ ကျော်မှာ တည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်….
ဒီလိုအရမ်းအေးတဲ့ ခါကာဘိုရာဇီတောင်ရဲ့ တောင်ခြေမှာ ရွာလေးတစ်ရွာရှိပါတယ်..အဲရွာကလူတွေဟာ အနွေးထည်ကောင်းကောင်းမဝတ်နိုင်ဘဲ အရမ်းကိုချမ်းအေးတဲ့ရာသီဥတုကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းခံစားနေရသူတွေပါ…သူတို့ရဲ့ ဒုက္ခကိုမကြည့်ရက်တဲ့ စေတနာရှင်တစ်ဦးကတော့ တောင်ခြေရှိ ရွာကို အရောက်သွားပြီး အနွေးထည်တွေလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်….
ချီးကျူးရမှာက အဲဒီရွာကို ရောက်ဖို့ လမ်းခရီးမှာ ၁၀ ရက်တိတိလမ်းလျှောက်သွားလာရတာပဲဖြစ်ပါတယ်….ဒီအကြောင်းလေးကို အောက်မှာ အပြည့်အစုံဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…ချီးကျူးလေးစားစရာကောင်းလွန်းလို့ပါ…“
ပန်နန်းဒင်ကနေ ငါးရက်တာ လမ်းလျှောက်ရတဲ့ ခါကာဘိုရာဇီ ရေခဲတောင်ခြေက တဆူထု ရွာလေးဆီနွေးထွေးခြင်းတွေ သယ်ဆောင်သွားပါပြီ။ အနွေးထည် ၆ သိန်းကျော်ဖိုးကို ရန်ကုန်ကနေ တဆူထုရွာလေးဆီလမ်းစရိတ် ၃ သိန်းကျော် ကျသင့်ပါတယ်။ ဒါတောင်မှ တဆူထုရွာက ရွာသူရွာသားတွေ ပန်နန်းဒင်အထိ(အသွားအပြန် ဆယ်ရက်လမ်းလျှောက် ခရီးကို) လာကြိုလို့ သက်သာတာပါ။ မဟုတ်ရင် ဒီထက် နှစ်ဆ သုံးဆ ပိုမိုပြီးလမ်းစရိတ်ကျသင့်မှာပါ။
ကျောင်းဆရာလေး UKyaw ZinWine ရဲ့ ကြိုးစားပေးမှုကြောင့် ကလေးတွေအတွက် လှူဒါန်းခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။(ကလေးတွေကို လှူဒါန်းနေတဲ့ ပုံများကိုတော့ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက် ဆရာလေးပြန်လာမှသာ ရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်..)ဦးအောင်ဇော်ဝင်းနှင့်တကွ အလှူရှင်များအားလုံးကို သာဓု သာဓု သာဓု ခေါ်ဆိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။” ဆိုပြီး သိန်း ၆၀ ဖိုး အနွေးထည်တွေဝယ်ပြီး သွားရောက်လှူဒါန်းဖြစ်တာလေးကို ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်….
တောတောင်အထပ်ထပ်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဒေသထိအရောက်သွားပြီး လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ အဲဒီအစ်ကိုရဲ့ စိတ်ဓာတ်က တကယ့်ကိုလေးစားစရာပါ….ဒါကြောင့် ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း အဲဒီအစ်ကိုကို ဂုဏ်ပြုစကားလေးပြောပေးနိုင်အောင် ပြန်လည်မျှဝေရေးသားလိုက်ရပါတယ်နော်…
”အသက်ကြီး လို့ ဗိုက်ကြီးပူ လာခြင်း ကို မပူပါနဲ့။ သက်ရင်းကြီးမြစ်နဲ့ ဒီလို ရှင်းလို့ရတယ်”
သိုက်ဆက် (သို့) သိုက်အကြောင်းသိလိုသူများ